Qoyska - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
Sida loo hagaajiyo ah xiriirka qoysaska? Sida Hooyo waa ka dheregto, Child waa ka jecel yahay, oo Dady waa ka badan ku faraxsan? Maxaad ma qaban xisbi? Fadlan ha ka welwelina, BVC kaa caawin doona inaad ku dhameysan oo dhan shaqo nadiif ah. .
Waxaad leedahay saaxiibo badan oo aad rabto inaad iyaga la yaab, sababta aan iyaga la yaab by marti xisbiga BBQ ah? Ha u ogolaan guriga qas ka heli jidka ku riyaaqayaa waqtiga aad saaxiibo fiican oo qaar ka mid ah. Halkan waxaa ku qoran qorshe 5 talaabo si ay u caawiyaan aad guriga aad u nadiifiso - stress lahayn, kaliya si sahlan loo fuliyo shaqooyinkaasi.
Sidaas daraaddeed halkaas oo si aad u bilowdo? Waayo, xisbiga BBQ ah, martida loo faqri doonaa waqtigooda inta badan ka baxsan, oo sidaas daraaddeed meelaha ugu muhiimsan ee si aad u nadiifiso guriga waxaa laga galo, qolka, jikada iyo musqusha nool. Looma baahna in la nadiifiyo guriga oo dhan laakiin halkii ay diiradda saaraan waddada xisbiga - dadka intooda badan ee dareenka noqon doonaa on loox, armaajo iyo meelaha la dhigay cabitaanka ay.
Its fudud, kaliya 5 talaabo:
Start by gaaray kasta oo ka mid ah waxyaabaha meel, oo gogosha toosinta, Barkimo, barkimooyin iyo refolding gana Dambiga (ku weyn for daboolaya kor kasta Wasaqda - si kastaba ha ahaatee ma waxaad u baahan doontaa inaad tan sameyso ka dib markii mid ka mid ah waxyaabaha BVC) . Next nadiifiyo miiska, screen TV iyo meelaha kale ee boodhka adigoo isticmaalaya maro microfiber ah. Ugu dambeyntii, xaaqdo ilaa ciidda ama xayawaanka timaha dabaqa, oo ha ilaawin inaad nadiifisid loox albaaka adiga oo isticmaalaya aad vacuum ee burush ama tuubada lifaaqa.